Google Ads Microsoft Teams ပေါင်းစည်းခြင်း
clever ads MS Teams နှင့်ဝင်ရောက်ပါ
MS Teams နှင့်ဝင်ရောက်ပါ
Google Ads ၊ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ကြော်ငြာများနှင့် Facebook ကြော်ငြာများ Microsoft Teams ပေါင်းစည်းခြင်း
စိတ်ကြိုက်သတိပေးချက်များကို Microsoft Teams ချက်တင်တွင်တိုက်ရိုက်ရယူပါ။
Microsoft Teams ထဲသို့ထည့်ပါ
Google Ads ၊ Bing ကြော်ငြာများနှင့် Facebook ကြော်ငြာမက်ထရစ်များကိုတစ်နေရာတည်းတွင်တွေ့မြင်ခြင်းဖြင့်သင်၏တန်ဖိုးရှိသောအချိန်ကိုသိမ်းဆည်းပါ။ သူတို့အား tabs အချို့ကိုပိတ်လိုက်!
ဒီပေါင်းစည်းမှုနှင့်အတူသင်တို့ရှိသမျှသည်တဆင့်သင့်ရဲ့စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးရဲ့တိုးတက်မှုကိုအကဲဖြတ်ဖို့မက်ထရစ်, ဂရပ်များ, နှင့်သတိပေးချက်များကိုသုံးနိုင်သည် Microsoft Teams !
Clever Ads သည်စျေးကွက်ရှိအခြားအလားတူကိရိယာများနှင့်မတူပါက၎င်းကိုသင်အသုံးပြုရန်အတွက်အခကြေးငွေမလိုအပ်ပါ။
သင်၏ dashboard ကို သုံး၍ သင်၏ မက်ထရစ် ကို Microsoft Teams မှမည်ကဲ့သို့လက်ခံသည်ကိုကိုယ်တိုင် ပြုပြင်နိုင်သည် ။ သငျသညျတွေ့သင့်အစီရင်ခံစာများအချိန်စာရင်းနှင့်သင့်သတိပေးချက်များကို configure ချင်အကောင့်ထားတဲ့ filter ။
အဘယ်ကြောင့် Microsoft Teams Clever Ads အက်ပ်ကိုတပ်ဆင်ရမည်နည်း။
အရေးကြီးသောမက်ထရစ်ကို Microsoft Teams မှတိုက်ရိုက်ရယူနိုင်သည်။ Google Ads နှင့် Bing ကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများနှင့် ပတ်သတ်၍ အထင်အမြင်များ၊ ကလစ်များနှင့်အခြားအရာများဖြစ်နိုင်သည်။
အမြင်အာရုံသင့်ရဲ့မက်ထရစ်မဆို၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုစောငျ့ရှောကျတဲ့ဂရပ်ကိုသုံးပါ။ ကဆွဲဆောင်မှု, ကုန်ကျစရိတ်, သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းသည်ဖြစ်စေ။
နေ့စဉ်သို့မဟုတ်အပတ်စဉ်အနှစ်ချုပ်များလက်ခံရရှိ, သူတို့အများပြည်သူသင့်ရဲ့အဖွဲ့ကြည့်ဖို့အဘို့လုပ်, ဒါမှမဟုတ်သာသင်၏မျက်စိအဘို့အဖို့ရှေးခယျြမှုရှိသည်။
သင်၏ Google Ads အတွက်တိုးတက်မှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးပါမည် Google Ads သင့်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုအပေါ်သို့မဟာဗျူဟာ။ သင်၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများနှင့်ပတ်သက်သည့်အကြံဥာဏ်များကို ၄ င်း၏ဘတ်ဂျက်ကိုချိန်ညှိ၊
တစ်မိနစ်ခန့်အကြာတွင် Microsoft Teams အတွက် Clever Ads ကိုသင်၏အကောင့်ထဲသို့တိုက်ရိုက်ထည့်နိုင်သည်။
သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာ Add to Microsoft Teams နှိပ်ပါ
သင့်ရဲ့ကြော်ငြာအကောင့်ဆက်စပ်ကြောင်းသင်၏ Google, Facebook, နှင့် / သို့မဟုတ် Microsoft ကအကောင့်ကိုသင်္ကေတပြ
app ကို၏အများအပြား features တွေအသုံးချရန်